Booliska oo ka hadlay dilka wiil iyo gabar wada dhashay loogu ... | Universal Somali TV
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa ka hadlay dilkii xalay wiil iyo gabar wada dhashay loogu gaystay Magaalada Muqdisho.
Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowdo Maxamuud Xuseen ayaa waxaa dilay ciidan la socday gaari Cabdi Bille ahaa, oo markaasi marayay Isgoyska Dabka ee Waddada Maka Al Mukarama.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in jidka oo mashquul uu ka jiray ay Ciidamada Dowladda rasaas ku furteen waddada, iyadoona rasaastaasi ay madaxa ka haleeshay Sakariye iyo Sowdo, xilli ay mooto bajaaj la socdeen.
Cabdifitaax Aadan Xasan, Afhayeenka Ciidanka Booliska ayaa sheegay in baaritaankooda ay si degdeg ah u soo bandhigi doonaan, dadkana ay la wadaagi doonaan.
"Gaariga rasaata huwiyay waxaa la caddeynayaa inuu ahaa nooca Cabdi Billaha, laba shirleyda ah, sida ganacsatada Dabka ku sugneyd ay caddeeyeen, kuna buufsanaa midabka Xoogga Dalka Soomaaliyeed. Waxaana sida ugu dhakhsiyaha badan, haddii aan nahay Booliska Soomaaliyeed u soo saari doonnaa kiiskaas iyo dhammaadkiisa, waana idinla socodsiin doonnaa." Ayuu yiri Afhayeenka.
Dhanka kale qoyska dhibaneyaasha ayaa sheegay inaanan la aasi doonin meydkooda, illaa iyo inta ay ka helayaan cadaalad, oo cidda ay uga fadhiyaana ay Dowladda Federaal tahay.
"Wax kale ma rabno anaga, wixii waa dhaceen, waxaan rabnaa cadaalad inaan helno, cadaaladana waxaan uga fadhino waxaa waaye Dowladda Somaliya. Illaa aan cadaalad helnana mala aasaayo marxuumiintaas." Ayuu yiri Cabdicasiis Maxamuud Xuseen oo la dhashay wiilka iyo gabadha uu dhibka ku dhacay."
Ciidamada Dowladda ee adeegsada wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa rasaas ku furta wadooyinka, marka uu ciriiri ka jiro, iyadoona xilliyada qaarkood rasaastaasi ay waxyeelo ka soo gaarto dadweynaha gaadiidka iyo lugtaba ku maraya wadooyinka magaalada.
Kan-xigaCiidamada Dowladda oo nin dhallinyaro...
Kan-horeAfar qof oo ku dhintay gaari ay miino...
63,298,205 unique visits